လှကျော်ဇော - တရုတ်တွေ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်အကြောင်း - MoeMaKa Media
Home / China / Currents / Hla Kyaw Zaw / Opinion / လှကျော်ဇော - တရုတ်တွေ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်အကြောင်း
လှကျော်ဇော - တရုတ်တွေ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်အကြောင်း
(မိုးမခ) ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၂၀
တရုတ်ပြည်က နှစ်စဉ် မတ်လမှာ (သူတို့အခေါ် အစည်းအဝေးကြီး ၂ ရပ်) လွှတ်တော်နှစ်ရပ် ကျင်းပလေ့ ရှိပါတယ်။
၁။ ပြည်သူ့နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံ ကွန်ဖရင့် (အကြံပေးအဖွဲ့)
၂။ အမျိုးသားပြည်သူ့ကွန်ဂရက် (ဥပဒေပြုအဖွဲ့)တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာတော့ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကြောင့် နောက်ဆုတ်လိုက်ရပြီး မေ‌လ၂၁ ရက်နေ့မှာမှ စတင် ကျင်းပနိုင်ပါတော့တယ်။
အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများကတော့ တရုတ်ပြည်ကို အဓိက လွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်နေတာက တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ (တပါတီစနစ်) ဖြစ်တာကြောင့် ဒါတွေဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်အစစ် မဟုတ်ဘူး။ လက်ညှိုးထောင်၊ ခေါင်းညိတ် (rubber-stamp) ဒီမိုကရေစီအတုပဲလို့ ဆိုကြပါတယ်။
တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ဒီမိုကရေစီအပေါ် ထားရှိတဲ့ သဘောထားကို ကြည့်ရအောင်ပါ။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ၁၉ ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက်ရဲ့ စတုတ္ထအကြိမ် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးက ချမှတ်ခဲ့တဲ့ အရေးကြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာတော့— ‘ဆိုရှယ်လစ် ဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုးလာရေးကို အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ရန်’ တဲ့။
ဒါဖြင့်… ဆိုရှယ်လစ် ဒီမိုကရေစီကို ဘယ်လို အဓိပွာယ်ဖွင့်မလဲ။
၁။ ပြည်သူတွေ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အဆောက်အအုံစနစ်များကို ထိန်းသိမ်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်၊
၂။ တရုတ် ထူးခြားချက်လက္ခဏာရှိတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်အတွက်ရော၊ တရုတ်ပြည် ကျင့်သုံးနေတဲ့ စနစ်များ ခေတ်မီရေးအတွက်ရော၊ အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်ရေးအတွက်ရော၊ အလုံးစုံကျတဲ့ အရေးတကြီး လိုအပ်ချက်။
၃။ ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအတွက် အဆောက်အအုံစနစ် ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်၊ ပါတီရဲ့ သိပွံနည်းကျစွာ၊ ဒီမိုကရေစီရှိစွာ တရားဥပဒေနဲ့အညီ အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည် ‌ကောင်းမွန် တိုးတက်စေရေးအတွက် လို့ ဆိုထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီလိုဆိုတော့ တချို့က တရုတ်ဒီမိုကရေစီဟာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီမိုကရေစီအစစ် အပြည့်အဝ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါလိမ့်မယ်။
တရုတ်ပြည်ရဲ့ ခေတ်သစ်သမိုင်းကို သိသူတိုင်း တရုတ်ပြည်သူတွေရဲ့ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအပေါ်၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်တွေအပေါ် ထားတဲ့ သဘောထားကို ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။
ဥပမာ– အခုတလော ဖြစ်ပွားသွားတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါဘေး စတင်ဖြစ်ချိန်က တရုတ်ပြည်သူတွေအကြား ပြောစမှတ်ပြုတဲ့စကားတရပ် ရှိပါတယ်။
“ဘာမှ မပူကြနဲ့။ တို့ပါတီဝင် ဆေးဝန်ထမ်းများ အရင်ဆုံး ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကို တက်မယ်” တဲ့။
တကယ်လည်း သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးက ပါတီဝင်များဟာ ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်း အများအပြားမှာ ရှေ့တန်းက စွန့်စားပါဝင် တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီး တချို့ ပါတီဝင်များ အသက်တောင် စွန့်လွှတ်ခဲ့ကြရပါတယ်။
(စကားချပ်။ ဒီလိုမျိုး အဖြစ်အပျက်တွေဟာ တရုတ်ပြည်မှာ အခုမှပေါ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တရုတ်က အခုခေတ်လူငယ်များအတွက် ပညာပေးအစီအစဉ်အဖြစ် သမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် ဖန်တီး ရိုက်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီကားတွေထဲမှာ– တရုတ်ပြည်သူတွေရဲ့ အလွန်ရှည်လျား ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလှတဲ့ တော်လှန်ရေးခရီးတလျှောက်၊ ဥပမာ- စစ်ပွဲများ (ကူမင်တန်နဲ့၊ ဂျပန်နဲ့၊ အမေရိကန်နဲ့) တိုက်နေရစဉ် ကာလများအတွင်း အန္တရာယ်ကြီးတဲ့၊ စွန့်စားရမယ့် တာဝန်များ (တောင်ကုန်းစခန်းများကို တိုက်သိမ်းဖို့ လိုအပ်ချိန်မျိုး)မှာ တပ်မှူးက- ‘ပါတီဝင်တွေ ငါ့နောက် လိုက်ခဲ့ကြလို့’ အော်ပြီး တောင်ကုန်းပေါ် ပြေးတက်သွားတတ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေး ကာလတလျှောက် ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် အမျိုးမျိုးကို တိုက်ဖျက်ရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုမျိုး ကြွေးကြော်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒါဟာ တရုတ်ပြည်မှာ ကလေးများကအစ နားယဉ်နေတဲ့ ပုံစံကျနေတဲ့ ပြောစမှတ်ပြုတဲ့စကားပါ။)
အခုလည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ရှေ့တန်း ဝူဟန့်ကို သွားရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင် ကြတဲ့ ဆေးဝန်ထမ်းအချို့ဟာ ခရီးမထွက်မီ ပါတီဝင်လျှောက်လွှာတွေကို တင်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ အခု မူလတာဝန်ကျတဲ့ ဌာနတွေ ပြန်ရောက်မှ ပါတီဝင်သိမ်းသွင်းတဲ့ အခမ်းအနားတွေ လုပ်ပေးနေတာ သတင်း တွေမှာ တွေ့နေရပါတယ်။
ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကတော့… ‘တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာ တရုတ်ပြည်သူတွေရဲ့ ယုံကြည်အားထားမှုကို ရရှိထားတယ်။ ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင် ဆိုတာဟာလည်း ပြည်သူလူထုရှေ့ကရပ်ပြီး ရန်အပေါင်းကို ကာကွယ်ပေးသူများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရထားတယ်’ ဆိုတာပါပဲ။
တခုတော့ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့… ၂၁ ရာစု တရုတ်ကွန်မြူနစ်များရဲ့ စဉ်းစားချက်တွေ၊ အမြင်တွေ၊ သဘောထားတွေဟာ သမားရိုးကျ မာ့က်စ်ဝါဒနဲ့တော့ တထပ်တည်း မကျတော့တာပါပဲ။
အခု ကျင်းပပြီးသွားတဲ့ ၁၃ ကြိမ်မြောက် (၂၀၁၈-၂၀၂၂) အမျိုးသားလွှတ်တော်ထဲက ကိုယ်စားလှယ် အချိုးအစားကို ကြည့်ရင်—
၁။ အလုပ်သမား-လယ်သမား - ၁၅.၇ %
၂။ ပညာရှင်-အတတ်ပညာရှင် - ၂၀.၅၇ %
၃။ ပါတီနဲ့ အစိုးရကေဒါများ - ၃၃.၉၃ %
၄။ အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်များ - ၂၄.၉ %
၅။ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များ - ၁၃.၆၉ % တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အလုပ်သမား၊ လယ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များက အများစု မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ကွန်မြူနစ်ပါတီက မဟုတ်တဲ့သူတွေ၊ တသီးပုဂွလိကတွေ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့ကသူတွေ စသဖြင့် အလွှာစုံ အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံက လူတွေ ပါပါတယ်။
ပြည်သူ့နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံကွန်ဖရင့် ဆိုရင် ပိုပြီး တပ်ပေါင်းစုဆန်ပါတယ်။
နယ်ပယ်စုံက နာမည်ကျော်အားလုံးလောက် ပါပါတယ်။
ရွှေတံဆိပ်ရ အားကစားသမားတွေ၊ နည်းပြတွေ၊ ထူးချွန်တဲ့… လူကြိုက်များတဲ့ ရုပ်ရှင်ပညာရှင်တွေ (ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်မင်းသား ဂျက်ကီချန်း ဆိုရင် နှစ်တိုင်း တွေ့နေရတယ်။) အဆိုတော်တွေ စုံပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များလည်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင် ပါဝင်ပါတယ်။ လွှတ်တော် ၂ ရပ်လုံးမှာပါ။
ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးကို အဆင့်ဆင့်- ကျေးလက်၊ မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ ပြည်နယ်ရှိ အမျိုးသားကွန်ဂရက် အဖွဲ့ခွဲတွေ၊ အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ခွဲတွေက ရွေးချယ်ပေးပြီး ‌နောက်ဆုံး ဗဟိုကို စေလွှတ်ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တပြည်လုံးရှိ အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းများ၊ ဌာနများက နောက်ခံအမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်သားများကတော့ အများစုကြီး ဖြစ်ပြီး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု အသီးသီးတိုင်းရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလူတွေအားလုံးဟာ နယ်ပယ်အသီးသီးကို ကိုယ်စားပြုတာ ဖြစ်တာကြောင့် ဒီလွှတ်တော်အစည်းအဝေး တွေမှာ တင်ပြကြတဲ့ အဆိုပြုချက်တွေကို ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းကြတဲ့အခါ ဘက်စုံက အကျိုးစီးပွား (အထူးသဖြင့် ပြည်သူလူထုကြီးရဲ့) တွေကို အဓိကထား ဦးစားပေးကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အုပ်ချုပ်ရေးဘက်မှာလည်း တရုတ်အစိုးရအတွင်းမှာ ပါတီဝင်တွေချည်းကို ဦးစားပေးတာ မဟုတ်ဘဲ၊ တချို့ နယ်ပယ်တွေမှာ ပါတီဝင်မဟုတ်တဲ့ ပညာရှင်တွေကို ဦးစားပေး ခန့်ထားမှုတွေ ရှိပါတယ်။
တကယ်တော့ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာ လူတန်းစားတရပ်၊ သို့မဟုတ် လူ့အလွှာတရပ်သက်သက်ကိုသာ ကိုယ်စားပြုတာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
တရုတ်အမျိုးသားတရပ်လုံးကို ကိုယ်စားပြုလာတဲ့သဘော ရှိပါတယ်။ တရုတ်အမျိုးသားများရဲ့ အခြေခံ ကွန်ဖြူးရှပ် သဘောတရားတွေပါ ရောယှက်နေပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ၁၉၇၈ ခုနှစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ တံခါးဖွင့်ပေါ်လစီ ကျင့်သုံးလာပြီးနောက် တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီအနေနဲ့ သမားရိုးကျ သဘောတရားတွေထက် လက်တွေ့အကျိုး ရှိ၊ မရှိပေါ် အခြေခံစဉ်းစားမှု က ပိုများလာပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် (ကျန်းစစ်မင် တင်ခဲ့တဲ့) ကိုယ်စားပြုမှု ၃ ရပ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားမှာ တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီအနေနဲ့—
၁။ ရှေ့တန်းရောက်တဲ့ ထုတ်လုပ်ရေးအင်အားစု၊
၂။ ရှေ့တန်းရောက်တဲ့တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု နဲ့
၃။ တရုတ်ပြည်သူ အများစုကြီးရဲ့ အခြေခံအကျိုးစီးပွားတို့ကို ကိုယ်စားပြုရမယ် လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဒီသဘောတရားနဲ့ပဲ တရုတ်ပြည်သူတရပ်လုံးကို (အထူးသဖြင့် တံခါးဖွင့်ပေါ်လစီအောက်မှာ ချမ်းသာလာတဲ့
လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးအပါ) စည်းလုံးညီညွတ်လာအောင် လုပ်ဖို့ ကြိုးစားလာပါတယ်။ ဒါဟာ တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ခေတ်နဲ့အမီ တိုးတက်လာတဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှုလည်းရှိတဲ့ အနေအထားကို ဖော်ပြတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘယ်လူ့အလွှာ၊ ဘယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းကပဲ လာလာ ပါတီဝင်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ပါတီရဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့ စည်းကမ်း များအတိုင်း မိမိကိုယ်ကိုယ် တာင်းဆိုတည်ဆောက်ဖို့ပဲလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အစည်းအဝေးတွေ ကျင်းပပုံကိုလည်း ကြည့်ရအောင်ပါ။
ပထမ တရက်နဲ့ နောက်ဆုံးရက်မှာသာ အစည်းအဝေး ခန်းမကြီးအတွင်း စုရုံးတက်ရောက်ကြပေမယ့် ကျန် ကြားရက်များမှာတော့ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း စသဖြင့် အဖွဲ့လိုက်ခွဲ စည်းဝေးကြ၊ ဆွေးနွေးကြ လုပ်ကြတာပါ။
တရုတ်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ကလည်း အေးအေးချမ်းချမ်း ပြောဆိုဆွေးနွေး အဖြေရှာတဲ့နည်းများ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အနောက်တိုင်းက လွှတ်တော်များလို ပွဲဆူတာတွေ မတွေ့ရတတ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒီလွှတ်တော်တွေကနေ ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့တဲ့ ဥပဒေတွေဟာ အတော်ကို မျှတမှုတွေရှိအောင် ကြိုးပမ်းထား တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တချို့ဥပဒေတွေဟာ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများထက်တောင် လူ့အခွင့်အရေးများအတွက် ရှေ့ကရောက်နေတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဥပမာ— ၁၉၅၄ ခုနှစ်ကတည်းက စလို့ (ရှန်စီပြည်နယ် ခရိုင်အတွင်းရေးမှူး ရှင်ကျိလန် တင်သွင်းခဲ့တဲ့) တူညီတဲ့ အလုပ်များအတွက် တူညီတဲ့ လုပ်ခများရရေး ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ကို ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံထဲ ထည့်သွင်းပေး ထားတာပါ။
(၂၀၁၈ သတင်းတပုဒ်မှာ ဘီဘီစီတရုတ်သတင်းဌာန အယ်ဒီတာအမျိုးသမီး ကယ်ရီဂရေစီက အမျိုးသား အယ်ဒီတာ လခရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပဲရလို့ဆိုပြီး အလုပ်က နုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။)
အခုလည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါဘေးဆိုးကြီး ကျရောက်လာတော့ တရုတ်အစိုးရက ‘ပြည်သူတွေရဲ့ အသက် နဲ့ လုံခြုံရေးဟာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း’ လို့ဆိုပြီး ပြည်သူလူထုရဲ့ အကျိုးစီးပွားကိုပဲ အဓိကထားခဲ့ပါတယ်။
လူတိုင်း အသက်ရှင်ခွင့်ဟာ လူအခွင့်အရေးများရဲ့ အခြေခံအချက်ပါ။
ဒါဟာ တရုတ်ပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်လို့ ပြောရလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီကပ်ဘေးကြီးအတွင်း တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ ဝူဟန့်က တာဝန်မကျေပွန်တဲ့ အစိုးရအရာရှိ ၇၀ဝ နီးပါးကို အဆင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ အရေးယူအပြစ်ပေးမှု ရှိသလို၊ တာဝန်တွေကို စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ဒါဇင်အချို့ ဝန်ထမ်းများကိုလည်း ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ တရုတ်ပြည်ဟာ သူ့ရဲ့ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန် ပြည့်စုံရင့်ကျက်အောင် အဆင့်ရှိစွာ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
#ကိုးကား — Beijing Review.28-5-2020/ pg18-19. The Different Perspective by Yu Liang.
လှကျော်ဇော - တရုတ်တွေ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်အကြောင်း Reviewed by MoeMaKa on 6:39 AM Rating: 5